पशुपतिमा मारिएका बालबच्चाको भोटो हेर्ने कसले ?
काठमाडौं, २५ असार । जावलाखेलमा देखाइने भोटो त सबैले हेर्छन् तर पशुपति भुवनेश्वरीमा देखाइने यस्तै महत्वको भोटो हेरिदिने कसले ?
शूलजात्राका क्रममा भुवनेश्वरीमा यस्तै महत्वको पाँचवटा भोटो प्रदर्शन गरेर वर्षदिनका लागि थन्क्याइएको छ । भोटो देखाउने अमालकोट कचहरी कार्यालयका द्वारे पूर्ण डङ्गोलका अनुसार यस्तो भोटो सातवटा थियो तर दुईवटा कामै नलाग्ने भइसकेको छ । ‘अब पाँचवटा भोटो बाँकी छन् । असार कृष्ण अष्टमीका दिन यो भोटो भुवनेश्वरी र सिफलचौरमा देखाउने गरिन्छ,’ उनले भने।
नागार्जुनका राक्षसले पशुपतिका बालबच्चा मार्न थालेपछि तिम्रा बच्चा पनि यसरी नै मारिदिन्छौँ भनेर बालबच्चालाइ त्रिशूलमा उनेर जात्रामा सहभागी गराउने विशेषता यो जात्रामा छ । राक्षसले मारेका बालबच्चाको त्यतिबेलाको यो भोटो यसै तिथिमा देखाउने गरिएको हो ।
डङ्गोलका अनुसार जात्रा सकिएपछि यो भोटोलाई भुवनेश्वरी पीठमा पुजारी रवि कर्माचार्यको जिम्मामा थन्क्याइएको छ । भोटोको गलामा आकर्षक धातुको बुट्टा छ । सातवटा भोटोमध्ये बाँकी रहेको पाँच भोटो भने दुरुस्त छ । जात्रा गरी भोटो पनि देखाइन्छ तर जात्रामा रौनक घट्दै गइरहेको छ ।
जात्रामा पशुपति क्षेत्रकै महर्जनका बालबच्चा सहभागी गराउनुपर्नेमा अभिभावकले बच्चा दिन नमानेपछि पाटनको लेलेबाट दुई बालक जात्रामा सहभागी गराइयो । गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारका अनुसार, जात्रामा दुई बालिका र तीन बालक सहभागी हुन्छन् । प्रदेश ३ का सभासद् एवम् पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य अमूर्त कला अन्तर्गत यो जात्रालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल भइरहेको बताउँछन्।
२०७५ असार २५ सोमबार १२:१९:०० मा प्रकाशित